Qvar - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Qvar
Generic Name: Qvar Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Qvar ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Qvar® (beclomethasone)ကိုပန်းနာရင်ကြပ်တွင် အများဆုံးအသုံးပြုကြ၏။ ပန်းနာထဖောက်ရာ၌ Qvar®ကိုမသုံးသင့်ပါ။ အသက်ကယ်ရှူဆေးကိုသာသုံးရမည်။
ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းသုံးစွဲပါ။ သင့်ကိုပေးထားသည့် အချက်အလက်များအားလုံးကိုဖတ်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်များအားလုံးကိုသေချာလိုက်နာပါ။
ဆေးအသုံးအား ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းသို့မဟုတ် အညွှန်းစာအတိုင်းသုံးရမည်။
နေကောင်းလာပြီခံစားရသည့်တိုင် ပြောထားသည့်ရက် အပြည့် Qvar®ကိုဆက်သုံးပါ။
ယခုမှစသုံးမည်ဆိုပါကသို့မဟုတ် မသုံးသည့်ရက် ၁၀ ရက်ကြာပြီဆိုပါကလေထဲသို့ ၂ ချက်အရင်ဖြန်းပေးပါ။ ဆေးရှူပြီးတိုင်းပါးစပ်ကိုသေချာဆေးပါ။ ဆေးသောရေကိုမျိုမချပါနှင့်။ ထွေးထုတ်ပါ။
အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန် puffer (inhaler)ကို spacer နှင့်တွဲသုံးနိုင်ပါသည်။
ပါးစပ်နှင့်တပ်ရသောအပိုင်းကိုတစ်ရှူးခြောက်၊ အဝတ်ခြောက်နှင့်သုတ်ပါ။ ရေဆေးခြင်းရေထည့်ခြင်းများမလုပ်ပါနှင့်။
မီးတောက်ရှိသည့်နေရာ၊ ဆေးလိပ်သောက်သည့်အခါ တို့တွင် မသုံးရပါ။ ပေါက်ကွဲတတ်သည်။
Puffer (inhaler)တွင် ဆေးအကြိမ်ရေစာကိုသိရန် အမှတ်အသားပါတတ်ပါသည်။ ပါလျှင်ဆေ ၂ ယူနစ်စာစီနောက်ပြန်ရေတွက်ရ၏။ အမှတ်အသားတွင် ၀ သို့ရောက်သွားပါကpuffer (inhaler)ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။
puffer (inhaler)ကို ဆရာဝန်ဆီသွားတိုင်း စစ်ဆေးပါ။ puffer (inhaler)အသုံးပြုနည်းကိုသေချာဖတ်ပြီးလိုက်နာပါ။ puffer (inhaler)ကိုမှန်မှန်ကန်ကန် သုံးနေကြောင်းသေချာပါ။
Qvar® (beclomethasone)ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Qvar® (beclomethasone)ကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Qvar® (beclomethasone)ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Qvar® (beclomethasone)အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Qvar အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Qvar®တွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
အသက်ရှူသည့်ပြဿနာများပိုဆိုးလာလျှင် အသက်ကယ်ရှူဆေးအလုပ်မလုပ်တော့လျှင် သို့မဟုတ် အသက်ကယ်ရှူဆေးကိုခါတိုင်းထက် ပိုလိုလာလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းပြပါ။
ဆေးသုံးချိန်အတော်ကြာလာလျှင် မျက်လုံးတွင်းဖိအားကိုစစ်ရပါမည်။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Qvar®ကိုရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာသုံးလာပါကဆေးကိုမရပ်ခင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။ ဆေးကို ဖြည်းဖြည်းရပ်ရန် လိုနိုင်ပါသည်။
သင့်၌ပိုးဝင်နိုင်ချေများ၏။ လက်ကိုမကြာခဏဆေးပါ။ အအေးမိ၊ တုပ်ကွေး၊ ပိုးဝင်သူများနှင့် ဝေးဝေးတွင်နေပါ။
ရေကျောက်နှင့် ဝက်သက်ရောဂါများမှာ Qvar®လိုစတီးရွိုက်ဆေးသောက်နေရသူများအတွက် သေသည်အထိ ဆိုးဝါးနိုင်ပါသည်။ ယခင်ကအဆိုပါရောဂါများမဖြစ်ဖူးလျှင် ဖြစ်နေသူများနှင့် ဝေးဝေးနေပါ။ ရေကျောက်၊ ဝက်သက်တို့နှင့် ထိတွေ့မိပါက ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
စတီးရွိုက်သောက်သေးမှ တခြားပုံစံကိုပြောင်းမည်ဆိုပါက ဆိုးဝါးပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ခွန်အားနည်းခြင်း၊ မောပန်းသလိုခံစားရခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ စဉ်းစားနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၊ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်နည်းခြင်းတို့လို့ လက္ခဏာများခံစားရနိုင်သည်။ ထိုလက္ခဏာများခံစားရပါက ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းပြပါ။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်မိလျှင်၊ ခွဲစိတ်ရမည်ဆိုလျှင် သို့မဟုတ် ပိုးဝင်သည်ဆိုလျှင် စတီးရွိုက်သောက်ဆေးများပိုလိုလာနိုင်၏။ စတီးရွိုက်ပိုတိုးလိုက်ခြင်း ခန္ဓါကိုယ်မှ ဖိစီးမှုတွေကိုကိုင်တွယ်သည့်အခါ အကူအညီဖြစ်စေပါသည်။ စတီးရွိုက်အပိုဆောင်းလိုနိုင်မည့်အခြေအနေများရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည့်ကဒ်ကိုသွားလေရာသယ်သွားပါ။
ရေရှည်သုံးခြင်းကအတွင်းတိမ်နှင့် ရေတိမ်များ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
ကာကွယ်ဆေးများမထိုးခင် ဆရာဝန်နှင့် အရင်တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးကြောင့် ပိုးဝင်နိုင်ချေမြင့်ခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးအာနိသင်မပြခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဆေးသည် ကလေးများနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များ၌ အရွယ်ကြီးထွားမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ သူတို့အတွက် ကြီးထွားမှုစစ်ဆေးခြင်းကိုပုံမှန်ုလုပ်ရန် လိုနိုင်၏။ ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Qvar ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Qvar ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Qvar နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Qvar® (beclomethasone)သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Qvar နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Qvar® (beclomethasone) က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Qvar နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Qvar® (beclomethasone)သည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Qvar ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်လူနာများ
ကနဦးစတင်ရမည့်ပမာဏ: 40 to 80 mcgတစ်ရက်နှစ်ကြိမ်။
ကနဦးစတင်ရမည့်ပမာဏ: 40 to 160 mcgတစ်ရက်နှစ်ကြိမ်။
အများဆုံးသုံးနိုင်သည့်ပမာဏ: 320 mcgတစ်ရက်နှစ်ကြိမ်။
ကလေးတွေအတွက် Qvar ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၅-၁၁ အရွယ်များအတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
ကနဦးစတင်ရမည့်ပမာဏ: 40 mcgတစ်ရက်နှစ်ကြိမ်။
Qvar® (beclomethasone)ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Aerosol, metered: beclomethasonedipropionate 40ug
Qvar® (beclomethasone)ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။